Dadka Aan Aqoonta Lahayn Fikirkoodu Ma Sheqeeyo!
Monday 19th July 2021 11:05:54 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Avram Noam Chomsky waa oday Maraykanah oo dhashay sanadkii 1928,
shahaadada PHD ku qaatay aqooonta falsafadda , maskaxda iyo sida ay u shaqayso (cognitive scientist) wakhtigan ku sugan University of Arizona ayaa qoraalo badan ka sameeyay xeelado dadka lagu kasbado oo maskxadoodana hogaanka loogu qabto si dhib yar.
Chomsky Wuxux yidhi " Caamada waxba kama duwan caruurta, ma kala garan karaan inaad nacas tahay iyo inaad fariid tahay, waana inaad mar kasta ula hadasho sida aad adigu rabto, mar kasta u sheeg been iyo mala awaal iyo sheekooyin samaysa oo khuraafaad ah” " Xataa haddii aad u sheegto waxaan dhici karin oo sababo ku qanciso way aaminayaan, waa inaad cabsi gelisaa taasi waa habka ugu fiican ee aad ku aaminsiin karto, waxa aad rabto”.
Wakhtigan waxa inoo soo baxaya kuwo shacabka ku cabsi gelinaya sheekooyin ay sameeyeen iyo in mustaqablku khariban yahay si aad ugu hogaansanto dano ay leeyihiin. Dal dhismay oo leh haykalka dawladnimo oo shaqaynaya oo aan dhib ku hayn bulshadiisa weeye. Qofka ku sheegaya khuraafaad iyo hadalo aan caqli iyo xikmadd ku dhisnayn marka hore ayuu og yahay inaad adigu tahay Nacas aan fikir iyo caqli midna lahayn oo la gashan karo hadba wixii la doono.
Suldan Cali Maxamed Oo Sheegay In La Ciqaabo Dadka U Hanqal Taagaya Siyaasiyiinta Somaliland Ee Soomaaliya Tagay [ Muuqa
"Waxaan Dadka Uga Sheekeeyaa Sababta Laba Jeer La Ii Furay" Sacdiyo Axmed Oo Arrimo Dhif Iyo Naadir Ah Ka Shee
"Dalka Waxa Ku Soo Badanaya Dadka Diinta Islaamka Ka Baxaya" Sheekh Dirir Oo Xaalado Taagan Ka Hadlay [ Muuqaa
Dawlada Canada Oo Dalkeeda U Oggolaatay Dadka Mareykanka Ah Ee Qaatay Tallaalka Xanuunka COVID19
Tirada Dadka Daadadka Ku Dhintay Ee Yurub Oo Cirka Isku Sii Shareereysa
"Mushaharkii Aanu Wax Ku iibsan Lahayn Waa Lala Meeraystay" Xildhibaan Barkhad Batuun Oo Arrimo Taagan Ka Hadl
"Maxamed Mooge Dalka Iyo Dadka Ayuu U Dhintay, Anaguna Waxaan..." Gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro [ Muuqaal ]